နွေဆူးလင်္ကာ: ကောင်းကင်မရှိတဲ့ ငှက်တစ်ကောင်အတွက် အရိပ်
ကိုလင်္ကာရဲ့ ဆန့်ကျင်ဘက်လေးက နှင်းဆီနီတွေကို မျှော်နေမှာသေချာတယ်၊ :)
ဆန့် ကျင်ဘက်လေးကတော့ နှင်းဆီနီတွေရရင် ပျော်နေတတော့မှာပဲ။
အားပါး....ကဗျာလေးက လေးနက်လွန်းလို့ ဘာပြောလို့ပြောမှန်းကိုမသိခဲ့ဘူး..။
ဆန့်ကျင်ဘက်က နှင်းဆီလားဟင်? :D
ဆန့်ကျင်ဘက်တွေက နှင်းဆီနီကို မျှော်နေတာလား။
ကဗျာလေးကောင်းလိုက်တာ။ ငါ့ရဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်လေးဆီ နှင်းဆီနီ ပို့ဖြစ်ပြီလား။ အေးမြမယ်ဆို အဲဒီမိုးကို မခိုခဲ့ရင် လိပ်စာလည်း ရှာစရာလိုခဲ့မှာ မဟုတ်ဘူးနော်။ တွေးချင်သလိုတွေးသွားတာပါ။ ကဗျာလေးကို နက်နက်ရှိုင်းရှိုင်းလေး ခံစားဖြစ်သွားပါတယ် ။ ကျန်းမာပျော်၇ွှင်ပါစေ
တဲ့လား.. ဆန့်ကျင်ဘက်လေးလည်း သိမှာပါ။
အိုင်ဒီယာအလန်းလေးနဲ့ စာတွေ ရေးကောင်းသလို ကဗျာရေးတော့လည်း ကောင်းလွန်းတာပါပဲ။
နှင်းဆီနီကို ပို့ရမဲ့ လိပ်စာရှင်
နှင်းဆီနီတွေ တပွေ့တပိုက်နဲ့ လှမ်းလာသူကို မျှော်နေပါ့မယ်တဲ့။ :)
နဂါးမလေးဆီကိုပို့မယ့် ပန်းကလည်း နှင်းဆီနီဆိုတော့...သေခြာတယ်...စနေမ လေးပဲဖြစ်ရမယ်...
ဖတ်ရတာ သိပ်ကို အရသာရှိတယ် ..
ကျနော်တို့ ကော်ဖီသောက်ရင်း မိုးစက်လေးတွေကို ထိုင်ခံစားကြသလိုပေါ့.. =)
ခဏခဏ မိုးခိုနေတဲ့ကောင်ပါ။”...ဆိုတဲ့နေရာလေးမှာ ထိသွားတယ်....။ တစ်ကယ်ဗျာ....း((
(စကားမစပ် မွေးနေ့ဆုတောင်းပေးတာ တစ်ကယ်ကျေးဇူးတင်တယ်ဗျ....း))
နှင်းဆီနီတွေ အမြန်ဆုံး ပို့ ပေးနိုင်ပါစေ
မင်္ဂလာပါ ကိုနွေဆူး ..
မိုးရေစက်တွေ အေးမြမယ်မှန်း သိရက်နဲ့ ခဏခဏ မိုးခိုမိသူပါတဲ့..
တကယ့်ကို အတွေးထွေ ထပ်ခါထပ်ခါ တွေးမိ ခံစားမိစေတဲ့ အရေးအသားတွေ နဲ့မို့ အရေးအသား အဖွဲ့အနွဲ့ စကားလုံး ရွေးချယ်တင်ပြမှု အားလုံး ပြည့်စုံ ကောင်းမွန်တဲ့ ကဗျာကောင်း တစ်ပုဒ်ပါ ကိုနွေဆူးရေ... အမြဲအားပေးနေတယ်။
ကဗျာလေးရဲ့ အဖွဲ့ထဲ ထိရှစွာ စီးဝင်မျောသွားရင်း..
ကဗျာကောင်းလေးတွေ ဖတ်ရတာ အစားကောင်းစားရတာထက် စိတ်အဆာပြေလှတယ်
ဟာ ! ! !
အံ့ဋ္ဌသခြင်းများစွာနဲ့ နွေဆူးလင်္ကာ ရဲ့ ကဗျာကလေးကို
နာလောက်တဲ့အထိဖတ်မိတယ်-နောက်ဆိုရင်- - - -
ရှိပြီးနှင်းဆီပန်းတွေအရောက်ဆက်သနိုင်ပါစေလို့- - -
အဲဒီစာသားလေးမိုက်တယ်..ကိုနွေဆူးရဲ့ ကဗျာလေးက အရမ်းလှတယ်..
အကိုရာ ကောင်းလိုက်တဲ့ ကဗျာ ဗျာ.....
နွေဆူးရေ - - -
လိုင်းပေါ်မှာလည်းမတွေ့ ဘူး - - -
ဘယ်တွေသွားပြီးဘာတွေလုပ်နေလဲဗျ - - -
ဒီကဗျာကလေးလည်းကြာလှပြီနော် - - -
အဆင်ပြေပါစေဗျာ - -
ထပ်ပြီးခံစားသွားပြန်ပြီဗျာ - - -
ငါ့ရဲ့ ဆန့်ကျင်ဘက်လေးရေ ဆိုတဲ့ ခေါ်သံလေး အကြိုက်ဆုံးဗျာ
တကယ်တော့ဆုမြတ်မွန်မွန်စာအုပ်ရှာရင်းဒီဆိုက်ကိုရောက်လာတာပါ .. ကဗျာတွေ့တော့မဖတ်ဘဲမနေနိုင်ဘူးလေ .. ဖတ်ပြီးသွားတော့ဒီမှာတင်မရပ်လိုက်ချင်ဘူး .. ခြေရာခံဖို့သဲလွန်စလေးပေးပါလား ။ ကိုယ်လဲကဗျာတွေနဲ့ရှင်သန်နေတဲ့သူပါ ။
ကောင်မလေး 13 ရေ ... ဘယ်လိုပဲ ရောက်လာ ရောက်လာ ဖတ်ပေးလို့ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာ။
အကို.. ဒီကဗျာတစ်ပုဒ်လုံး ကျနော်ကူးလိုက်မိပါတယ်.. ဖတ်ဖူးသမျှကဗျာတွေထဲမှာ တစ်သသနဲ့ ပြန်ဖတ်ချင်စရာကောင်းလွန်းတဲ့ကဗျာလေးမို့ .. ကျနော် သိမ်းလိုက်မိတယ်ဗျာ... =)